Mugwagwa Kutara Paint Vagadziri | China Road Yekumaka Paint Fekitori & Vatengesi
—— Pendi Yekumaka Mugwagwa ——
Thermoplastic Road Kugadzira Paint
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yemumugwagwa we thermoplastic kugadzira pendi. Chitarisiko: Hapana kuunyana, gwapa, blister, kutsemuka, kudzima, Glued matai, ruvara rwekuzadza chitarisiko runofanira kuvharwa kune zvakajairwa; kuramba kwemvura: Hapana zvinoitika zvisina kujairika maawa makumi maviri nemana mushure mekunyudzwa mumvura.
Thermoplastic Vibrating Line yekumaka Paint
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yeiyo thermoplastic vibrating line-yekumaka pendi. inodedera ye thermoplastic road yekumaka pende ine thermoplastic resin, yakagadziriswa rabha, mafirita, uye zvakakosha zvinhu nezvimwe zvinhu. Iyo inovandudzwa pahwaro hwekutsvaga kwakanyanya kuoneka uye vibration. Inoshandiswa zvakanyanya kune yepakati mitsara yemigwagwa (inodarika-inorambidzwa mitsara), kumucheto mitsara yemugwagwa mukuru, kuyambuka mitsetse yekudzikira, zvichingodaro.